पाकिस्तानका नागरिक दक्षिण एसियामै खुसी, नेपालीहरु कतिऔं स्थानमा ?
काठमाडौं, चैत ७ । पाकिस्तानका नागरिक दक्षिण एसियामै सबैभन्दा खुसी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोलुसन्स नेटवर्कले सार्वजनिक गरेको खुसीसम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन २०१७ मा पाकिस्तान दक्षिण एसियामा सबैभन्दा खुसी मुलुकको सूचीमा पर्न सफल भएको हो ।
पाकिस्तान सूचीको ८० औं स्थानमा पर्न सफल भएको छ ।
यसअघि सबैभन्दा खुसी राष्ट्रको सूचीमा दक्षिण एसियाबाट पहिलो स्थानमा पर्न सफल भुटान भने यसपटक दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ ।
भुटान सूचीको ९७ औं स्थानमा रहेको छ भने नेपाल भुटानभन्दा केही नम्बर पछि मात्र रहेको छ ।
सूचीमा १ सय १० औँ स्थानमा रहेको बंगलादेश दक्षिण एशियामा चौथो, १ सय २० औँ स्थानमा रहँदै श्रीलंका पाँचौ र १ सय २२ औँ स्थानमा रहँदै भारत दक्षिण एशियामा छैठौँ स्थानमा रहेकाे छ ।
कुल १५५ राष्ट्रहरुमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा पाकिस्तान दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खुसी राष्ट्रको सूचीमा सुचीकृत भएको हो ।
नेपाल कतिऔं स्थानमा ?
यसपटक नेपाल दक्षिण एसियाको तेस्रो खुसी मुलुकमा सूचीकृत भएको छ ।
यसअघि १ सय ७ औं स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक भने ८ स्थान माथी उक्लदै दक्षिण एसियाको तेस्रो खुसी मुलुकको सूचीमा सूचीकृत हुन सफल भएको हो । नेपाल यसपटक खुशी राष्ट्रहरूकाे ९९ अाैं स्थानमा पनर् सफल भएकाे हाे ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादन, सामाजिक साहयता, औसत आयु, भ्रष्टाचार लगायतका विषयलाई आधार बनाई खुसी मापन गरिएको छ ।
नर्वे संसारकै सबैभन्दा खुसी राष्ट्र
यसपटक युरोपियन मुलुक नर्वे सबैभन्दा खुसी राष्ट्र बन्न सफल भएको छ ।
नर्वेले डेनमार्कलाई पछि पार्दै संसारकै सबैभन्दा खुसी राष्ट्र बन्न सफल भएको हो ।
सूचिमा नर्वेपछि डेनमार्क, आइसल्याण्ड, स्वीजरल्याण्ड, फिनल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, क्यानडा, न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया र स्वीडेन पहिलो १० राष्ट्रको सूचीमा पर्न सफल भएका छन् ।
त्यस्तै विकसित मश्चिमा मुलुकहरु अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र फ्रान्स क्रमस १४ औँ, १६ औं,१९ औँ र ३१ औँ स्थानमा छन् ।
त्यस्तै सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, बुरुण्डी, तान्जेनिया, सिरिया सूचीको अन्तिममा छन् ।